I-Carl Henry Global Blog
UCarl Henry Global - Singakusiza kanjani - izinketho zakho!
Uma unquma ukuhlanganisa uhlelo lwama-intanethi ungadinga usizo oluthile ngokuya kwezinga lakho lobuchwepheshe, unezinketho ezinkulu ze-3;
Thola umuntu ukuthi akubonise ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngokusebenzisa ulwazi olufana nalesi sifundo nabezindaba ezisekelayo. Lokhu kuyasiza uma unesikhathi esiningi sokufunda futhi ufuna ukunciphisa ukutshalwa kwezimali okuqala okufanele ukwenze.
Thola umuntu ukuthi akwenze nawe futhi anikeze usizo oludingayo uma uludinga. Lona ukulinganisela komqondo phakathi kwesikhathi kanye imali edingekayo ukuze uqalise, ungenza umsebenzi omkhulu futhi uthola kuphela usizo lwethu njengoba uludinga, noma, uma uludinga!
Ngabe othile ubeke lona i-100%, lokhu kuphelele uma izimali zitholakala futhi isikhathi siphezulu kuwe, ngoba senza lokhu sonke isikhathi esingawuqedela umsebenzi ngengxenyana yesikhathi esingazithatha ngaso okokuqala .
Sithatha ngokungathí sina ukuphepha kwakho!
"Sithatha isithunzi sakho ngokujulile" - UCarl Henry Global uthuthukise ukusingatha kwethu ukuba ibe iwebhusayithi ephephile - ngokuzayo maduze amathuba amabhizinisi aphezulu kakhulu!